STEP 1. ဟိုတယ်နှင့်စားသောက်ဆိုင်အားရွေးချယ်ပေးပါ
STEP 2. နေ့ရက်နှင့်အချိန်တို့ကိုရွေးချယ်ပေးပါ
ကြိုတင်မှာကြားမှုတွင်ပါဝင်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်အရေအတွက် ကလေးသူငယ်ဟူသည် အသက်4နှစ်နှင့် 12 နှစ်အကြား အသက်အရွယ်ရှိသူများအဖြစ်သတ်မှတ်ပါသည်။
STEP 3. ကြိုတင်မှာကြားမှုအားလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသူ၏အချက်အလက်ကို ထည့်သွင်းပေးပါ။
သင့္တြင္ LOTTE HOTEL ဆုခ်ီးျမွင့္မႈမ်ားရွိပါသလား။ 'ကၽြႏ္ုပ္၏စာမ်က္ႏွာ' ေပၚရိွ ဆိုင္းအင္ႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အလိုအေလ်ာက္ထည့္သြင္းၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေလာ့ဂ္အင္
အမည် * လိုအပ်သည့် အကွက်များ
မိုဘိုငျးဖုနျး * လိုအပ်သည့် အကွက်များ
နံပါတ်သာ ထည့်သွင်းရမည် (အထူးစာလုံးသို့မဟုတ်နေရာလွတ် မရိုက်ထည့်ရ)
စပေ့ဘား သို့မဟုတ် ဟိုင်ဖန် (-) မပါဘဲထည့်သွင်းရန်။
နိုင်ငံသား ရွေးချယ်ပါ Albania(355) Algeria(213) American Samoa(684) Andorra(376) Angola(244) Anguilla(1+809) Antigua and Barbuda(1+809) Argentina(54) Armenia(374) Aruba(297+8) Australia(61) Austria(43) Azerbaijan(994) Bahamas(1+242) Bahrain(973) Bangladesh(880) Barbados(1+246) Belarus(375) Belgium(32) Belize(501) Benin(229) Bermuda(1+441) Bhutan(975) Bolivia(591) Bosnia and Herzegovina(387) Botswana(267) Brazil(55) British Virgin Islands(1+809) Brunei Darussalam(673) Bulgaria(359) Burkina Faso(226) Burundi(257) Cambodia(855) Cameroon(237) Canada(1) Cayman Islands(1+345) Central African Republic(236) Chad(235) Chile(56) China(86) Christmas Island(61+94) Cocos (Keeling) Islands(61+916) Colombia(57) Commonwealth of Dominica(1+809) Comoros(269) Congo (Brazzaville(242) Cook Islands(682) Costa Rica(506) Cote D´Ivoire(225) Croatia(385) Cuba(53) Cyprus(357) Czech Republic(42) Denmark(45) Djibouti(253) Dominican Republic(1+809) Ecuador(593) Egypt(20) El Salvador(503) Equatorial Guinea(240) Eritrea(291) Estonia(372) Ethiopia(251) Falkland Islands(500) Faroe Islands(298) Federated States of Micronesia(691) Fiji(679) Finland(358) France(33) French Guiana(594) Gabon(241) Gambia(220) Germany(49) Ghana(233) Gibraltar(350) Greece(30) Greenland(299) Grenada(1+809) Guadeloupe(590) Guam(671) Guatemala(502) Guinea(224) Guinea Bissau(245) Guyana(592) Haiti(509) Honduras(504) Hong Kong(852) Hungary(36) Iceland(354) India(91) Indonesia(62) Iran(98) Iraq(964) Ireland(353) Israel(972) Italy(39) Jamaica(876) Japan(81) Jordan(962) Kazakhstan(7) Kenya(254) Kiribati(686) Korea, Republic of(82) Korea,Democratic People´s Republic of(850) Kuwait(965) Kyrgyzstan(7) Laos(856) Latvia(371) Lebanon(961) Lesotho(266) Liberia(231) Libyan Arab Jamahiriya(218) Liechtenstein(423) Lithuania(370) Luxembourg(352) Macao(853) Madagascar(261) Malawi(265) Malaysia(60) Maldives(960) Mali(223) Malta(356) Marshall Islands(692) Mauritania(222) Mauritius(230) Mexico(52) Moldova(373) Monaco(377) Mongolia(976) Morocco(212) Mozambique(258) Myanmar(95) Namibia(264) Nauru(674) Nepal(977) Netherlands(31) New Caledonia(687) New Zealand(64) Nicaragua(505) Niger(227) Nigeria(234) Niue(683) Norway(47) Oman(968) Pakistan(92) Palau(680) Panama(507) Papua New Guinea(675) Paraguay(595) Peru(51) Philippines(63) Poland(48) Portugal(351) Puerto Rico(1+787) Qatar(974) Reunion(262) Romania(40) Russian Federation(7) Rwanda(250) Saint Helena(290) Saint Lucia(1+758) San Marino(39) Saudi Arabia(966) Senegal(221) Seychelles(248) Sierra Leone(232) Singapore(65) Slovakia(42) Slovenia(386) Solomon Islands(677) Somalia(252) South Africa(27) Spain(34) Sri Lanka(94) St. Kitts and Nevis(1+809) St. Vincent and Grenadines(1+809) Sudan(249) Suriname(597) Swaziland(268) Sweden(46) Switzerland(41) Syrian Arab Republic(963) Taiwan(886) Tanzania(255) Thailand(66) Togo(228) Tonga(676) Tunisia(216) Turkey(90) Turkmenistan(7) Tuvalu(688) Uganda(256) Ukraine(7) United Arab Emirates(971) United Kingdom(44) United States(1) Uruguay(598) US Virgin Islands(1+809) Uzbekistan(7) Vanuatu(678) Vatican City State(39+6) Venezuela(58) Vietnam(84) Zambia(260) Zimbabwe(263)
အီးမေးလ် * လိုအပ်သည့် အကွက်များ
စားသောက်ဆိုင်ကြိုတင်မှာကြားမှုတစ်ခုပြုလုပ်သောအခါ အကယ်၍ သင့်ထံ၌စုံစမ်းမေးမြန်းစရာတစ်ခုခုရှိပါက သို့မဟုတ် အကယ်၍ သင်သည် ပြည်ပမှလာရောက်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ခရီးဆောင်ဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် နောက်ထပ် ဆက်သွယ်စရာအချက်အလက်ကိုပေးအပ်ပါ။
စားပွဲရရှိနိုင်မှုအားစစ်ဆေးပြီးသည့်နောက် စားသောက်ဆိုင်သည် သင်၏ကြိုတင်မှာကြားမှုအားအတည်ပြုပေးနိုင်ရန်အတွက် (ဖုန်း၊ စာတိုပေးပို့မှု သို့မဟုတ် အီးမေးလ်တို့ဖြင့်) သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ် ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍သင်သည် ပြည်ပမှလာရောက်သူဖြစ်ပါက သင့်ထံသို့ ကျွနု်ပ်တို့လာရောက်နိုင်မည့် ဆက်သွယ်စရာအချက်အလက် များကို ကျေးဇူးပြု၍ပေးအပ်ထားပါ။
Consent to essential personal information collection (လိုအပ်သည့် အကွက်များ)